Ngabe ukuxubana kwe-Australia Shepherd Blue Heeler kukulungele? - Izinhlobo
Ngabe ukuxubana kwe-Australia Shepherd Blue Heeler kukulungele?
Uthola ini uma weqa izinhlobo ezimbili ezithandwa kakhulu zokufuya? Amathani wamandla nobuhlakani obungenakuqhathaniswa, yilokho!
I- Umxube wase-Australia Shepherd Blue Heeler ihamba ngamagama amaningana: I-Australian Blue Heeler, i-Texas Heeler, i-Australia Heeler, ne-Queensland Heeler i-Australian Shepherd mix , ukubala ezimbalwa.
Qhubeka ufundele lonke ulwazi oludingayo mayelana nale hybrid emangalisayo!
Yiziphi izinhlobo ezimbili ezenza iTexas Heeler?
Ngabe iTexas Heeler ibukeka kanjani?
Isimo: Ngabe i-Texas Heeler iyinja enhle yomndeni?
Ukunakekela ingxube yakho ye-Aussie Shepherd Blue Heeler
Ngabe abelusi baseBlue Heeler base-Australia banempilo?
Ukuthola imidlwane yaseTexas Heeler iyathengiswa
Uzothanda lezi ezinye izinhlanganisela zokwalusa
Ngabe ingxube ye-Australian Shepherd Blue Heeler ingajoyina iphakethe lakho?
Yasungulwa eTexas ngawo-1970, abaseTexas Heelers babenjalo okhiqizelwe ukusebenza usuku lonke, nsuku zonke. Akumangazi ukuthi le ndlela evundlile ivame ukutholakala ibolekisa ngezidladla ezisiza abafuyi bezinkomo.
Njenge-hybrid, ingxube ye-Aussie Shepherd Blue Tick Heeler ayaziwa yi-American Kennel Club (AKC). I- Inja Registry yaseMelika (I-DRA) kanye ne I-American Canine Hybrid Club (ACHC) bobabili bayalubona uhlobo, noma kunjalo.
Ukuqonda kahle ukuthi yini eyenza le ngxubevange, sidinga ukwazi izinhlobo zabazali bayo. Ake sibheke i-Australian Shepherd ne-Australian Cattle Dog ngokujulile.
Yazi uMalusi wase-Australia
Abelusi Base-Australia , noma Ama-aussies , kukhona abaziwa kakhulu ngamakhono abo avelele okwalusa . Izimpande zabo zinweba zize ziye nasezintabeni zaseYurophu zasePyrenees, lapho okhokho babo bokuqala babekhonza njengabangane abelusayo.
Ngama-1800s, abelusi banamuhla base-Australia bazenzela igama (ngokoqobo!) Izilwandle kude e-Australia Outback.
Kungakabiphi, lawa ma-canine angeniswa e-United States. Abalimi kanye nabafuyi baseMelika West ngokushesha bathatha lolu hlobo olusebenza kanzima, futhi konke okunye kungumlando.
Usazobona abelusi base-Australia basebenza epulazini laseMelika. Okwabo i-athleticism kanye ne-drive kubenza babe ngabangenele ukhetho lokuqina nokulalela, futhi .
Hlangana nenja yezinkomo yase-Australia, u-AKA Blue Heeler
Ungavumeli iziteketiso zikudide. I- Inja Yezinkomo Zase-Australia neBlue Heeler yizinhlobo ezifanayo! Ungase uzwe futhi le canine ebizwa nge IQueensland Heeler noma U-Australia Heeler .
Izinja Zenkomo Zase-Australia, njengo-Aussie Shepherd, zalungiswa eLand Down Under. Lapha, bona bathole idumela lokuzinikela kwabo nokubekezela kwabo .
Ngokungafani nozakwabo we-canine, noma kunjalo, isihlahla somndeni wakwaBlue Heeler sinamagatsha ambalwa ngaphezulu.
IBlue Heelers yinzalo ye- USmithfield , umhlambi waseBrithani owangeniswa e-Australia.
Ngenkathi uSmithfields elwela ukuzivumelanisa nemvelo enokhahlo, babephakanyiswa nezinhlobo ezimangele kakhulu, njenge IScotland Highland Collies futhi Ama-Dingoes .
Kepha ubuqambi abugcini lapha! AmaDalmatians futhi Ama-Kelpies kamuva baphonswa engxenyeni, basinika i-Australian Cattle Dog yanamuhla.
Njengoba kungenzeka uqagele, ukubukeka kwe-Blue Blue Heeler yase-Australia kukude nokuqhathaniswa.
Hlangana no-Ozzy noPhinea, abaseTexas Heelers - Umthombo wesithombe
Kuyenzeka ngezikhathi ezithile ukuthola i-Texas Heelers ebukeka ifana, noma ngabe usuka kudoti ofanayo!
Bavame ukuziqhayisa nge-Australian Cattle Dog’s uhlaka lwemisipha enezindlebe eziphakanyisiwe noma eziwile phansi nekhala elimnyama.
Amehlo abo ayindilinga angaba nombala ogqamile oluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, noma ukuxuba kwakho kokubili.
Abanye bangaba nombala wamehlo ohlukile komunye njengoba ama-Aussies angaba nawo i-heterochromia .
Izingxube zeBlue Heeler Australian Shepherd ziyizo imvamisa izalwa ne-bobtail , kepha bangaba nomsila omude.
Ubuwazi ukuthi izinja ezinayo imisila eboshiwe iwuphawu lwefa labo njengohlobo olusebenzayo ?
Kuthathwa njengesibopho uma benomsila ogcwele lapho belusa amaqembu amakhulu, izinhlobo eziningi kakhulu zavela zaba nemisila emifushane.
Ingxube ye-Australian Shepherd Blue Heeler izoba nkulu kangakanani?
Ukuma Amasentimitha angu-17 kuya kwangu-22 (43 kuya ku-56 cm) nesisindo Amakhilogremu angama-45 kuye kwangama-55 (20 kuya ku-25 kg) uma ikhule ngokugcwele, i-Australia Blue Heeler isayizi elungile yokuqoqa imfuyo.
Ngenkathi abesifazane baseTexas Heelers bengaba bancane kancane, akuvamile ukuthi kube khona umehluko osayizi obonakalayo phakathi kwabobulili obubili.
I-Texas Heelers ene- Umalusi omncane wase-Australia umzali, noma kunjalo, uvame ukuba nokwakha okunamandla.
Noma zincane futhi ziphakathi nendawo, izingxube ze-Cattle Dog Australian Shepherd zidinga indawo eyanele yokugijima. Lapho igceke likhulu, kuba ngcono!
Kepha sincoma ukubheka umlando wabo, ngakho-ke kufanele bahlale ezindaweni zasemakhaya, njengasemaphandleni nasemapulazini .
Izinhlobo zamajazi nemibala yenhlanganisela yeBlue Heeler Australian Shepherd
Ngokuvamile bane- ijazi elikabili elifushane ukuya kobuphakathi - ibhantshi elimelana nesimo sezulu kanye nebhantshi eliminyene.
Ezinye iziphambano ze-Australian Shepherd-Cattle Dog zinezinwele eziqondile noma ezijiyile ezibushelelezi, kodwa ezinye zinoboya obuvame ukuqina.
Lokhu kuqhekeka kuza ngezinhlanganisela ze omnyama, omhlophe, onsundu, onsundu, ompunga, ohlangothini oluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu .
Bavame ukudlala umugqa omhlophe kusuka ebunzini labo kuya kumlomo wabo, izifihla-buso, amabala, amabala, namachashazi ale mibala.
Umxube weQueensland Heeler Aussie Shepherd akuyona eyenhliziyo encane. Wonke amathambo emzimbeni wabo azinikele ekusebenzeni kanzima nasekwaluseni.
Hlangana noRoscoe, i-Australia Blue Heeler - Umthombo wesithombe
Kanjalo, ungalindela i-pooch enamandla, ehlakaniphile. Kungakho benza abangane abahle kakhulu bemindeni abajabulela ukuphuma ngaphandle futhi bekhuthele.
Njengabelusi bemfuyo, abaseTexas Heelers banjalo evikela ngokwemvelo . Ngokuvamile ngeke ubabone benza ubungani obusheshayo nabantu ongabazi noma izilwane ezingaziwa.
Ngalesi sizathu, ukuxhumana nabantu njalo kubalulekile. I-Blue Heeler yakho yase-Australia idinga amathuba ajwayelekile okuxhumana nabanye abantu nezinja.
Uma isilwane sakho singakutholi lokhu kuvezwa, ukuthambekela kwaso kokubuka izinja kungaba nzima kakhulu.
Izindaba ezimnandi ukuthi i-Aussie Shepherd Blue Heeler iyaxubana kuyaqabukela ukukhonkotha ngaphandle kwesizathu . Banobungani obumangalisayo nepakethe yabo.
Phakathi kwabo ukwethembeka namandla aphezulu , le ndlela enqamulelayo ingazijabulisa nomndeni wonke – ngisho nezingane!
Kubalulekile ukuthi uqaphele, nokho, ukuthi umuzwa wokwelusa ka-Heeler wase-Australia ungaba yisibusiso nesiqalekiso.
Siyaxwayisa ngokuletha lo mdlwane eduze kwezilwane ezincane. I- isilingo sokujaha nokwalusa unamandla kakhulu.
Uzofuna ukugada isikhathi sokudlala nezingane ezincane ngenxa yalesi sizathu. UFido angabenza iphutha ngezimvu!
Ngenhlanhla, iTexas Heelers isabela kahle ebuholini obuhle. Bahlose ukujabulisa, futhi bafunda ngokushesha . Abanikazi abanesipiliyoni akufanele babe nenkinga yokuqondisa ubuntu obunamandla bale hybridi.
Qaphela ukuthi lo baba wenja uyihlanganisa kanjani i- ngokuchofoza , ukuphatha , kanye nokudumisa ukuklomelisa ingane yakhe yaseTexas Heeler ngomsebenzi owenziwe kahle. Sicela uthathe isikhashana ukujabulela uMaggie oneminyaka engu-15 ubudala ebonisa amaqhinga akhe amahle kule vidiyo!
Umxube wakho weQueensland Heeler Aussie uzothanda ukuqeqeshwa ngaphezu kokuganga. Ezimele futhi ezinobuhlakani, lezi zinja zijabula kakhulu lapho zihamba futhi zisebenza.
Kufanele ulungise kangaki iTexas Heeler yakho? Futhi badinga ukuzivocavoca okungakanani? Izimpendulo zingakumangaza!
Kepha asikho isidingo sokukhathazeka. Yizinja zabaklami besondlo esiphansi ngokwanele.
Kufanele ulungise kangaki iTexas Heeler yakho?
Uma ngabe ubuzibuza, ama-Australia Shepherd Blue Heeler mixes ayachitha. Ngamajazi abo aphelele futhi ukuchitha unyaka wonke , la ma-pups acishe abe njenge-hypoallergenic njengoba inja ingayithola.
Noma kunjalo, lokhu kuqhekeka akudingi ukuzilungisa okunzima. Izikhathi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngeviki kuvame ukwanele, kepha ungahlala uwaxubha kaningi, ikakhulukazi uma umngane wakho woboya enezinwele ezinde.
Unganikeza futhi i-Australia Heeler yakho ukugunda izinwele okulula ukusika (ayikho ipun ehlosiwe) esikhathini sokuzilungisa jikelele. Vele UNGABAGUNDI!
Ungadinga ukuwageza kaningi kunezinye izingxube, ikakhulukazi uma zihlala zisebenza ngaphandle. Awufuni imoto nabo ngokugeza ngakunye, noma kunjalo.
Gcina ama-suds ukuze usulwe ngokugcwele njalo emavikini ayisithupha kuye kwayisishiyagalombili kakhulu . Okwamanje, thembela emanzini okugeza ukukhipha noma yikuphi ukungcola noma udaka.
Ngenkathi unwaya izindlebe zikaFido, zihlolisise izimpawu zokucasuka noma ukutheleleka. Zisule ngendwangu ehlanzekile noma usula ukususa noma imuphi udoti.
Ukuze uqede inqubo yakho yobuhle yase-Australia Blue Heeler, shayela i-their amazinyo kabili ngeviki futhi ngisika izinzipho zabo Izikhathi ezi-1 ukuya kwezi-2 ngenyanga .
Ngabe izivivinyo zase-Australia zidinga kangakanani?
Ukube i-Texas Heeler yakho ibisenza ngendlela yabo, ngabe bangaphandle belula izitho zabo kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwelanga. Uma kubonakala ngokweqile, hlela phambili okungenani imizuzu engama-60 kuya kwengu-90 ngosuku , noma amamayela ayi-14 ngesonto.
Khumbula ukuthi le yi ubuncane obungenalutho ngalesi sihlanganisi. Uma kukhulunywa ngokuzivocavoca umzimba, okuningi cishe njalo kungcono.
Uzibuza ukuthi ungakwazi yini ukuqhubeka? I-Aussie Blue Heelers akudingeki ukuthi abantu babo banikeze ukuzivocavoca ngqo. Badinga nje wena ukuthi unikeze ithuba.
Ukubanika umsebenzi abazowenza kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokunikeza ukukhuthazeka ngokwengqondo nangokomzimba abakufisayo.
Awunayo imfuyo ezulazula egcekeni lakho? Fundisa ukuxuba kwakho kwe-Aussie Shepherd Blue Heeler ukusiza ukusiza endlini.
Ngenye indlela, akuyona into ezwakalayo yokuqasha izinja ezisebenzayo kubalimi bendawo.
Uma lokho kungeyona inketho lapho uhlala khona, vulela ingane yakho egcekeni eliphephile futhi umbuke egijima! Faka emidlalweni yobuchopho nangesikhathi sokuziqeqesha ukuze ukhathale ngempela le pooch.
Ungamnika ngisho ne- ithoyizi elibukeka njengesilwane ukwanelisa isidingo sakhe sokujaha.
Ngokunikezwa kobuhlakani babo, ingxube yeQueensland Heeler Australian Shepherd ithokozela ubusha obuthile ngezikhathi ezithile. Zizwe ukhululekile ukushintsha inqubo yabo yokuzivocavoca futhi ubanikeze okuhlangenwe nakho okusha.
I-Texas Heelers ingabekezelela izimo zezulu ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukushisa okukhulu. Kusho ukuthini lokho kuwe? Izinketho, mngane wami!
Le hybrid ithatha imidlalo ye-canine efana nokushesha, i-flyball, ne-rally ngesikhathi esithile. Ayikho inkambo ye-doggie agility eduze kwakho? Pakisha amanzi amaningi ahlanzekile, bese uthatha uFido uyonyuka intaba.
Abakwa-Australia Heelers nabo bayabhukuda abakuthandayo. Akukho lutho olungavunyelwe kulolu hlobo olumangele!
Ukudla nokondla: i-kibble engakanani kakhulu?
Ngokwesilinganiso, i-Aussie Blue Heelers idinga 2.5 kuya ku-3 izinkomishi kokudla ngosuku, sandlala ngaphezu kokudla okubili kuya kokuthathu. Uma i-pup yakho isebenza ngokwengeziwe noma inokwakhiwa okukhulu, ungahle udinge ukukhulisa leli nani.
ITexas Heelers ingadla ukudla kwenja okwenzelwe izinhlobo eziphakathi noma ezinkulu. Uzofuna ukuqiniseka ukuthi i-kibble yabo inayo okungenani amaprotheni angama-20% .
Qaphela ukuthi izingxube ze-Cattle Dog Australian Shepherd zingadla okhethwayo. Cabanga ukuthenga inani elincane lokudla uze uthole umkhiqizo onomsoco ofanele ama-pups wakho wokunambitha.
Ama-Blue Heelers ase-Australia awavamile ukuzalwa enezimo ezinzima zezempilo. Ngokunakekelwa okulungile, ubude bempilo yabo bungaba nje Iminyaka engu-12 kuya kwengu-16 !
Lokhu akusho ukuthi iTexas Heelers ayikwazi ukuthuthukisa izimo zezempilo, noma kunjalo. Uma umngane wakho we-canine ejwayelene nemihlambi, usengozini enkulu yokuthi indololwane kanye ne-hip dysplasia ngenxa yokuguga.
Izimo zamehlo , njenge-Progressive Retinal Atrophy (PRA), iCollie Eye Anomaly (CEA), kanye ne-cataract, zingakhula njengezinja zakho.
Ngokwengeziwe, izakhi zofuzo ezifanayo ezinikeza i-Aussie Blue Heeler ijazi labo lokuhlangana nazo zingadala ukungezwa . Yize lokhu kungesona isiqinisekiso, kungenzeka, ngakho-ke kungcono ukukwazi.
Ezinye izinkinga zempilo okungenzeka ukuthi ukuxubana kwakho neBlue Heeler Australian Shepherd kungaba nakho distichiasis , i-osteochondritis dissecans, isithuthwane, nekhala likaCollie noma Thola i-Lupus Erythematosus (NGOKUVUMELANA NE)
Hlangana noLuna, umdlwane waseTexas Heeler - Umthombo wesithombe
Inhlanganisela eziningi ze-Australia Shepherd & Blue Heeler ngokuvamile zibiza $ 800 kuya phezulu . Ngaphandle kokuba inja yomklami eyivelakancane, ukuba yinhlanganisela efiselekayo yomsebenzi wasepulazini kanye nezofuzo kungaletha intengo ephakeme.
Ukuthi uzokhokha malini nakho kungathinteka ubulili bomntwana, ukubukeka, nohlu lozalo lwabazali.
Ungahle uqhekeke phakathi kokuthenga nomfuyi noma ukwamukela iTexas Heeler. Ake sihlole zombili izinketho ukuze ukwazi ukuthatha isinqumo esihle kakhulu.
Abalimi be-Australia Shepherd Blue Heeler mix
Lolu hlobo oluxubekile luthandwa kakhulu eTexas, kepha ungathola amazinyane weTexas Heeler ngaphandle kweLone Star State.
Ungahle udinge ukuhamba, ngakho-ke hlela ngokufanele. Awufuni ukukhipha ikhaya vakashela futhi uhlangane futhi ubingelele ngemidlwane. Qiniseka ukuthi umugqa wakho wesikhathi wokuthenga ne-akhawunti yesabelomali yalokhu.
Kuyafaneleka ukucela abalimi abangaba khona ukuthi bahlinzeke iziqinisekiso zezempilo ngaphambi kokuthi ushaye umgwaqo. Uzowadinga lo mbhalo noma kunjalo, ngakho-ke ungahle uwacele ngaphambi kwesikhathi.
Uma umfuyi engakwazi noma engeke akunikeze, ungaqondisa kabusha imizamo yakho endaweni enedumela elihle.
Ulungele ukuqala? Naba abalimi abambalwa okufanele ubabheke:
Izinkomo zeCrossBow (EJacksonville, FL)
Idolobha Nezwe Texas Heelers (ESeneca, NM)
ALT Texas Heeler Izidlwane (IDalhart, TX)
Inja yase-Aussie-Australia iyasindisa
Abanye abathandi bezinja bakhetha ukwamukela kunokuba bathenge. Uma lokho kuzwakala njengawe, uyokujabulela ukwazi ukuthi kunenqwaba ye-Australian Shepherd ne-Australian Cattle Dog ehlenga ezweni lonke!
Lapho ukhetha indawo yokuhlenga, phatha le nqubo ngendlela obuyothenga ngayo ngomfuyi.
Vakashela inhlangano yokutakula mathupha. Ikakhulukazi uma usebenzisa inja endala, uzofuna ukuhlangana nabo kuqala. Ungazi kanjani futhi ukuthi ngabe ubuntu bakho buyadlala?
Qiniseka ukuthi indawo yokukhosela isivele isingathe ukuvakashelwa kokuqala kwe-vet nemigomo, futhi. Ngeke wazi konke ngomlando wokutakula kwakho, kodwa lokhu kunakekelwa okwengeziwe kubanikeza umlenze wokuhlakanipha kwezempilo.
Siyazi ukuthi ukhathazekile ngokunikeza i-Australian Blue Heeler ikhaya labo laphakade, ngakho-ke sihlanganise lolu hlu lokutakula ukukusiza:
Ukutakulwa Kwezinja ZaseTexas (Fort Worth, TX)
Inhlangano Yezokutakula Izinja Yase-Australia (IGarden City, NY)
Umalusi wase-Australia uFurever (IRancho Cucamonga, CA)
I-HeRD ye-WY, Inc. (USheridan, WY)
Khuluma! ILouis (I-Troy, IL)
Njengoba kunezinhlobo eziningi zomklami ezikhangayo laphaya, kungaba nzima ukukhetha. Uma ungakasithathi isinqumo, nayi le nzalo eyengeziwe okufanele uyicabangele.
I-Australian Shepherd Lab mix
Hlangana no-Honey, ingxube ye-Australian Shepherd Lab - Umthombo wesithombe
Abadumisi mihle kakhulu emindenini yezilwane eziningi ezifuywayo. Ukuhlanganisa ILabrador Retriever's ubungane nesimo sengqondo se-Aussie sokuhamba, le hybrid iyindlela yokuzijabulisa!
Ukuhlanganiswa kwe-Australian Shepherd Poodle
Mee ingxube ye-Australian Shepherd Poodle
Ukuzwela izinwele zesilwane? I- I-Aussiedoodle kungahle kube yilokho okudingayo! Ngefayela le- Poodle’s Izakhi zofuzo ze-hypoallergenic, ama-Aussiedoodles ayindlela enhle yokuchitha phansi. Ungathola ngisho ne- I-Mini Aussiedoodle uma izinhlobo ezincane zifanelana nokuthanda kwakho.
Ukuhlanganiswa kwe-African Cattle Dog Corgi
Hlangana noMochi, ingxube ye-Australian Cattle Dog Corgi - Umthombo wesithombe
Eyaziwa njenge UCowboy Corgi , le ndlela enqamulezayo iyathandeka impela – futhi iphaphile. Faka isithombe nge-Heeler merle emfushane UCorgi imilenze. Couple lokho nge-spunk yeCorgi, futhi uthole i-pooch esesilinganisweni esinobuntu obukhulu!
Umxube we-Australian Cattle Dog Border Collie
Hlangana noDax, ingxube ye-Australian Cattle Dog Border Collie - Umthombo wesithombe
Ama-Border Collies ziye zabizwa ngokuthi uhlobo oluhlakaniphe kunazo zonke emhlabeni. Wit yabo kanye nothando lukaBlue Heeler? Uma usemakethe yenja yokwalusa enhle kakhulu enobuhlakani obusezingeni eliphezulu, ungabe usadlula lapho Umngcele Heeler .
Umalusi wase-Australia ongumalusi waseJalimane
Hlangana noMila, ingxube ye-Australia Shepherd German Shepherd - Umthombo wesithombe
Obeye aziwe njengo Umalusi waseJalimane wase-Australia noma I-German Aussie , le ndlela enqamulezayo iyathandeka kepha inamandla kakhulu. Ungathembela ku Umxube wase-German Shepherd wase-Australia kunoma yimuphi umsebenzi, umsebenzi, noma ezemidlalo.
Uma ukuba nesithunzi se-canine akuyona inkinga, lo kungaba umngane ophila kuwe.
Hlangana neBomber, ingxube ye-Australia Shepherd Blue Heeler - Umthombo wesithombe
I-Texas Heelers yiyona inja yokusebenza engabalulekile . Njengoba kungakhathali futhi kunesiphithiphithi, lokhu kuqhekeka kwenza ukwaluka kubonakale kulula.
Inja enalolu hlobo lwekhono ihamba phambili ezandleni zomnikazi onolwazi. Ama-Blue Heelers ase-Australia chuma nabaholi abanolwazi, abakhuthele!
Ucabanga ukuthi lowo mnikazi kungaba nguwe? Sitshele kumazwana ukuthi kungani wena neTexas Heeler niwumdlalo ofanele!
Okudingeka Ukwazi Nge-Labradoodle Yase-Australia
husky uhhafu nengxenye pomeranian
Inja yaseJalimane yenja / labrador retriever
isikhathi sokuxuba se-yorkie shih tzu
hlobo luni lwemibuzo yami yenja / hlobo luni inja yami esivivinyweni online
ingakanani imidlwane yelabhu yesiliva
ilebhu emnyama vs retriever yegolide